Sensitive Skin တွေရဲ့ SuperHero!!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Sensitive Skin တွေရဲ့ SuperHero!!!
Sensitive Skin တွေရဲ့ SuperHero!!!
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ Sensitive Skin မှ Healthy Skin အဖြစ်​ပြောင်းလဲအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် Iope Derma Repair CICA Cream နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Cream ကို အသားအရေ Sensitive ဖြစ်သူများ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အဓိကထား အနုစိပ်ဖော်စပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Cream မှာ အသားအရေကို ချောမွေ့စေနိုင်တဲ့ Cypress Tree Leaf Extract, ခြောက်သွေ့မှုနဲ့ ပျက်စီးမှု များကို ပြန်လည်ကုသပေးနိုင်မယ့် Madecassoside, အရေဖျားပြဿနာနဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အသားအရေဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးမယ့် Panthenol တို့ပါဝင်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါ ယားယံမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် Parabens, Animal Ingredients, Fragrances, Colorants, PEG surfactants နဲ့ အခြားသော အသားအရေဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများကို ပါဝင်ဖော်စပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။
Cream Type အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် Toner, Serum အသုံးပြုပြီးနောက် သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏကို ယူပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေအတွင်း စုပ်ဝင်မှုအားကောင်းစေဖို့ရန်အတွက် လက်ဖဝါးကို အသုံးပြုကာ ပုတ်ပေးရပါမယ်။ ပုံမှန်အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် ၂ ပတ်အတွင်း အသားအရေ နီမြန်းခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်း တို့ သိသိသာသာ ကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီတော့ ရာသီဉတု အပြောင်းအလဲကြောင့် ကြမ်းတမ်းပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ လေတိုက်ခြင်းကို ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 32$ ကျသင့်ပြီး UK Direct Online Shop တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source: www.iope.com